Dawladda Kenya oo Dhaqaalle Xoogan ku bixisay Muranka Badda Soomaliya | Kalshaale Warar Sugan iyo Suugaan
Dawladda Kenya oo Dhaqaalle Xoogan ku bixisay Muranka Badda Soomaliya
May 14, 2019 - 13 Aragtiyood
Nairobi ( Kalshaale ) Dawladda Kenya ayaaa dhaqaalle xogan ku bixisay Kiiska Muranka Badda eek ala dhexeeya Dawladda Soomaaliya, iyadoo Qareennada labada dhinac u doodaya ayaa la sheegay inay yihiin kuwa helaya faa’idada ugu badan ee dhaqaale, Xilli kiiska muranka badda ee Soomaaliya iyo Kenya uu marayo meel xasaasi ah.
Wargayska Business Daily ee ka soo baxa dalka Kenya ayaa Qoray dowladda Kenya ayaa lacago malaayiin doollar ah ku bixisay kiiska muranka xuduudda dhanka badda ee kala dhaxeeya Soomaaliya, Iyadoo Wasaaradda maaliyadda ee dalka Kenya ay ku bixisay lacag dhan Ksh300 oo milyan oo shilinka Kenya ah taasi oo u dhiganta 3 milyan oo doolar.
Kenya iyo madaxweynaha Uhura si fiican ayuu Farmaajo u bahdilay!
1. Kenya gobolka gedo badhkiis way qaadat gidaara waa ku wareeji-satay.
2. Uhura Kenyata xidhiidka dublamaasiga ayuu Soomaaliya u Jaray , safiir Tarsana 6 saacadood kudahood baa Kenya looga mastaafuriyay. Isaga oo safiirka Kanya weli Xalane Joogo.
3. Farmaajo intuu fulaynimo awgeed wuxuu u cararay Adis Abbeba oo Ahmed Abey ka baryay inuu dhexdhexaadiyo Uhura Kenyata. Abey dhabta ayuu ku qaaday Farmaajo Uhura ayuu u geeyay, sidii gabadh lala tegay.Ceebay tacaakl.kkk Weliba Abey Farmaajo markaa wuxuu ka codsaday inuu Hargaysana geeyo. Hanoo keenina ayuu Mujaahid Muuse si cad ugu sheegay Abey Ahmed.kkkk
4. Bada daayee, gobolka Gedo oo Farmaajo ka soo jeedo iyo Jubada dhexe kala badh ayaa dhulkii Kenya qaadatay gidaara ku meeratay!
Isma oga, aqalkii bay weli aslaysaa!
Waar nijaasta Kenyanka waxaa fursad siinaya daanyeerta madaxda ka ah Soomaaliya.
NFD oo maqan sidee looga hadli karaa bad iwm
Si kastaba Soomaalidu waxay u baahan caqli, geesinnimo iyo garasho ayay dhulka maqan ku doonato, baddeedana ku ilaashato
Qaran adhax u jabay weeye Soomaaliya
Oohin baa ka socota!kkk Ugu yaraan waxa ku gumaysta hada oo ay 2019 8 dal oo Afikaan ah oo huwan magaca Amison. Intaas ba way kugu dul jiifaan kee ugu horaysiin inaad iska dul kiciso?
Ma waxaad iska dul kicin;
1. Kenyaan-ka badii iyo dhulkii markuu kaala wareegay, diyaarada Muuq-disha ka baxda Wajeer kaantarool-ka u dhigtay si uu bahdilaada kuugu dhamays tiro?
2. Mise Ugaandhiis-ka Xalane ka dhigtay, sida Musaveni sheegay, in ay u shaqo tagaan askarta Ugaandha anshax xumada ka sameeya Zoo_maal.
3. Mise, Nigeria, Burundi, Itoobiya, Seraleon, Jabuuti baad iska furi?
Laaleys meeshii muqdisho marto ayeey hargeysa mari gashaanti aamusnaanta lagu mehriyaa ayaad tihiin ee iska aamus
Muuq-disha anaa mehersaday, furay! Waxaa hal mar wada guursaday 8 dal oo africaan ah, gashaantina kuwaas ayaad u tahay.
Gabdhaha ku barbaara Xamar, Xalane subaxii kayuu ayay u galaan, si sangudhiidhiga looga iibiyo!
Markaa hadii cid waajib ku tahay inay aamusto waa adiga!
Anigu dalkaygii baan cisi iyo sharaf ku joogaa.kkk
Laalays waa miskiin aanan aragtii Islaam, Soomaaliyeed iyo xitaa beeleed lahayn,
Wuxuu ka yimid gaashaamo ama wataa passport Xabashi. Wuxuu ku faanaa inuu Xabashida axmaarka ku dhashay kaga dhow yahay wiilka koonfurta Soomaaliya ku dhashay,
Waa nin lahayn murti iyo dood dhiibasho. Doodda wacan wuxuu u yaqaan oohin iyo calaacal
Nacaybkiisa uu u qabo Somaliya wuu la god geli doonaa sida adeerkiisa waraabe hadduu hidaayo helin
Waa gun aanan garasha lahayn oo gumeysiga u arka gobonnimo.
Hala yaabin waa reer dhan oo aan weligood hoorin oo gumeysiga u adeegi jiray.
Marka Laalays waa nijaas weligiisa ka korin gaal jecayl iyo Soomaali nacayb
Khallii masiiratu towjiih tastamir wal kilaabu tanbaxu
Shaqsi weerar waxba noo tarimasyo oo geelayagii ayaa cirka lagu maalayasa.
War Maryooley aan isku dambaynre horta dhulka inta hartay caruurta mustaqbalka haloo dhiciyo.
Ogadenia ayaa Gaas ugu badan laga helay oo 5% qaata qasab looga dhigayaa, 95% Xabadhi la dhaqaaqday.
Ummmad inay isxado loogu dowgalay.
Kenya waa gardato garab og!
Horta kan dhabayaco ee meesha xukuma ma waxma taraa, waa inuu sirta iyo cadowga Kenya dabada kariixaya noosheegaa.
Kenya keligeed ma socoto, waa boob cad, NFD la siiyey hadda xoogaa oil laga helay xeebaha Kismaayo usoo tafaxaydatay…
Reer ba’ow yaa ku leh?
Somallida degan Kenya way nolol fiican tahay Somalida degan Somaliya guud ahaan
Somalida degan Ethopiya way nolol fiican tahay Somalida degan Somaliya guud ahaan.
Saw taasi uma muuqato inay Somalidu ku fiicanyihiin shaqaale u shaqeeya dad kale ama ka shaqytaan meelo ay dad kale maaulaan?
Somalida waxaa u fiican inay iska shaqystaan oo wadankan wayn ee ay isku cunayaan dad kale la wareego.
Badbaa la qqatay iyo waxaasi waa sheeko iska cadiifad ah oo iska madhan.Badda la qaatay waxaa ka daran Somalida oo Ummad ahaan dhimatay.
Ciidanka Kenya waxaa Somaliya soo galiyay,Dr Gaandhi,Cabdi Wali Gaas iyo Saasiyiin Somaliyeed oo Reer Kenya ah.
Lacagta waxaa bixiyay midoowga Yurub oo Kenya siiyay go ahead.Taasi markii ay fushay ayaa loo galay wajigii labaad ee ahaa in loo galiyay shaati la yidhaa Amisom.Laysma waydiinin ama ragii so hogaamiyay ee ka tirsanaa dawladii Shariif lama ciqqabin.
Arinkan Badda ragbaa ku suntan.Ragii way joogaan,Laysma waydiinin oo dombiba looma raacine way joogaan kuwii oo wali adeege ayaal u ah shisheeye.
Somaliya waxaaba ceeb loo yaqaan qofkii yidhaa”waar dawlada ha lagu daba filo”.
Muqdisho ninka ka yimaada ee taga meelaha lagu sheego maamul goboleedyada,waxaa loogu yeedha nin qaldan oo Xamar lacag ka soo qaatay oo aan xaq u layan inuu degaanka Madaxwayne ka noqdo.
Maxaa loo diidayaa in nin Muqdisho ka yimid uu madaxwayne ka noqdo maammul goboleedyada?
Waa maxay sobobta uu mucaarid ugu noqonayaa dawlada ninka madaxwaynaha ka noqdaa maamulada goboladu?
Ma jiraan dad fahansan in Maamul Goboleedyada laga maamulo meelo kale?
Ma jiraan dad fahansan inay maamul goboleedyadu yihiin adeegayaal shisheeye?
Kenya Baddan way qaadan doontaa.Haday imiga qaadan waydana muddo aan dheerayn ayay qaadan doontaa.
Hal shay ayaa Somalida midaynka,kaasi oo ah kacdoon Islaamic oo ka dhasha Somaliya.Waana mid saamayn ku yeelan lahaa inay Somalida oo idil.Markii uu soo baxay calaamadihii kacdoonkaasi ayay Reer Galbeedku soo degeen Xerada Xalane.Wax la idhaa dawlad oo aan meelna xumina waa loo malmaluuqay.Dawladana waxaa loo sameeyay maamulo la yidhaa Federal oo iyada lagu curyaamiyo si aanay shaqdeeda u gunin.
Ciidanka Amison uma joogaan wax kale oo aan ahayn inay Somaliya ka ilaaliyaan inuu ka dhasho kacdoon Islamic ah oo Somalida mideeya.
Waa la yaqaan oo waa la bartay Somalida in aanu jirin wax kale oo midaynkara.
Kuwan Somaliland sheegta ee iska biqlaynayaa waa Daayeero isku wada aqli ah.
Waxay aaminsanyihiin in iyaga la qoonsandoono oo ay dawlad noqonayaan.
Maxaa lagu falayaa dawladnimadoda,hadiiba dawladnimadii Somaliyeed meesha laga saarayo?
Ma fahansana wixii hubka loo siinayay inay ahyd inay ka qayb qaataan burburibta qaranka Somaliyeed oo looga baqay inuu noqdo qaran awoodle oo carqaladeeya danaha Reer Galbeedka ee marin ka Zuez.
Hadii uu dhaco dagaal Israel iyo Carab ah.Somaliya oo ah dawlad xoog badan oo la safata Carabta.Marinka Suez halis ayuu galayaa oo Somalidu way leedahay go’aan qaadashada noocaasi.70skii ayay Mufirada Reer galbeedku miiska soo saareen arinkaasi.Waxaana lagu goaamiyay in Somaliya meesha laga saaro.Kani wuxuu ahaa qaybta ugu wayn ee dawladii Somaliyeed loo burburiyay.
Markaa Somaliland wax loo aqoonsadaaba ma jiro.Hayska biqleeyaan meesha ha ku qaataan wax yar oo ay isku jiidiitaan.
Somalida waxay hore ugu socon ladahay waa kulligood malo awaal wixii dhacay ku socdaan.
Hadda ninkaan Mr bahal wuxuusan ogeyn waxa hubo nooga dhiigayaa.
Waxa ognahay sida haddii gobolada ismaamulaan sida wadanka loo dumiyo way adkaan, waayo marka wax dhacaan gobolkaas wax ka dhicin intii kale waa nabad.
Somalia waxaa dumiyey, waxay ahayd wadan hal magaalo keliya waxwalba u yaaleen, marka duntay dalkii dhan raacay.
Muxuu. alifornia state dhib ku hayaa haddii Texas is maamusho ama maxay Dhubai dhib ku haysaa haddii Abudubay ismaamusho…
Somalida haysta waxaa ka mid ah, looma daayo qofku waxa uu yaqaan, midbaa waxa la tahay sida korontada isaga dhagaya, wuxuusan waxba ka oweyn.
Hadda kan Mr Bahal waxay uga dhagtay run u maleeya oo ah, rag eedayn iyo gobolo ismaamula diid.
War mustaqbal ka hadal iyo waxa la isku haysto labada dal.
Adal empire oo run iyo wax ka jiray la aqoon iyo Somalia ayaa 5 u qaybiyey, meesha history class miyuu mooday.
This polical action now and result of the future.
Yaa ummad noocaas ah u talin kara?
Gobolo ismaamula iyo dowladda dhexe oo dastuur iyo sharci lagu dhaqma u yaalo maaha dhibka Somalia haysta taas weliba amnugooda iyo dalaan weyn wada noolaado oo bottom Xamar nin waxwalba ka riixayn waa danta guud.
History class malo awaal ah iyo marka dalku dego ninwalba wixii lasoo maray haka hadlo, hadda dalka hala xasoliyo oo dalkaan hore loo dhacay hadana in qaar la goosto halaga hadlo.